Diomedes - Inkokeli kwiMfazwe yeTrojan
I-Diomedes - Ikhokeli eliMandla kwiMfazwe yeTrojan
Iqhawe lamaGrike i-Diomedes, ngelo xesha i-Helen of Troy, yayingomnye weenkokeli ezixabisekileyo kakhulu ze-Achaeans (amaGrike) kwi-War War, enikezela mhlawumbi iinqanawa ezingama-80. Ukumkani waseArgos, naye wayeyindoda enamandla, wabulala kwaye wabulala abaninzi baseTrojans kunye nabalingani babo, ngexesha leMfazwe yeTrojan, kuquka i-Aphrodite eyangenela ukuba ingambulali unyana wakhe u-Aeneas. I-Diomedes, ngoncedo luka-Athena, naye walimala iAres.
Diomedes kunye neOdysseus
I-Diomedes nayo yabandakanyeka kwezinye ze-Odysseus, zangoku kuquka ukubulawa kukaPalamedes, umGrike owayekhohlise u-Odysseus ukuya empini kwaye mhlawumbi wayeyiqulunqe i-alfabeti . Wayephakathi kwamadoda ase-Achaean angene ngaphakathi kwesisu sehhashi elikhulu lenkuni amaGrike awanikela eTrojans, ngokuqinisekileyo njengesipho kuThixokazi.
Diomedes kunye neThebes
Ekuqaleni ebomini bakhe, uDiomedes uthathe inxaxheba kwisiganeko sesizukulwana sesibini ngokumelene neThebes, okwenza enye ye- epigoni . Abazali bakhe babenguTydeus wase-Aeolian, unyana kaCalydonian ukumkani u-Oeneus, kunye noDeipyle. U-Diomedes watshata no-Aegialia xa ehamba eTroy. I-Eggan ngo-Aphrodite owayenomgwenxa ngaye ngenxa yengozi yesikhumba eyayikusekela u-Aeneas, i-Aegialia yayingenalukholo kwaye igcinwe i-Diomedes ekungeneni kwakhona kwisixeko sase-Argos. Ngoko, emva kweMfazwe yeTrojan, iDoomedes waya eLibya apho wayevalelwe nguKumkani uLiscus.
Intombi yenkosi uKallirrhoe yamkhulula. Emva koko iDiomedes - njengoLeusus uhambela i-Ariadne phambi kwayo-ehamba ngomkhumbi. NjengoDidio xa u-Aeneas ehamba, u-Callirrhoe wazinikela.
Ukufa okungaqhelekiyo kweDiededes
Kukho iingxelo ezahlukeneyo malunga nendlela iDiomedes yafa ngayo. Omnye u-Athena uguqula i-Diomedes ibe nguthixo.
Kwesinye, uyafa ngokukhohlisa. Kwesinye isinye, i-Diomedes ifa ngokuguga. Kusenokwenzeka ukuba wadibana no-Aeneas e-Italy.
Umkhulu ka-Diomedes wayenguAdrastus, ukumkani waseArgos, owathi uDiomedes waphumelela etroneni. Uyise, uTydeus, uthathe inxaxheba kwii sixhenxe malunga nohambo lweThebes. I-Heracles yayingumalume kayise.
Kukho amanye amaDiomedes, nawo anxulumene neHeracles, enye enee-mares zokutya ezidalwa ngabantu ezithathwa yiHeracles kwintsebenzo yesibhozo.
Kwenye indawo kwiWebhu:
Ikhasi likaCarlos Parada kwiDiomedes, umzali wakhe, umlingani, inzala, imvelaphi, imithombo, kunye namadoda aseDomedes abulawe kwiMfazwe yeTrojan.
Ikhasi likaCarlos Parada kwi-epigoni.
Abantu bevela kwiMfazwe yeTrojan omele uyiyazi
I-Biography ye-Atilla i-Hun
Ukuphuhliswa kweYurophu Yomanyano - Isihlandlo
Iziganeko ezibalulekileyo kwimbali yesiFrentshi
UElilio Jacinto wasePhilippines
Iintlanu zoMoya zamaRoma awungammelanga ukuba udle
Izilwanyana ze-Cheerleading - ezincinci ukuya kwi-Varsity squads
Iingoma ezilungileyo kakhulu ze-Blues-Rock Of the 1970s
Ndiyifundela njani i-Exam Bar Bartor's Exam?
I-FSU, i-Florida State University i-GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
UNdunankulu waseCanada uJohn Diefenbaker
Imbali yeNtshutshiso yeThelevishini
Funda Ukudlala 'Auld Lang Syne'
Indlela i-Mob igcina ngayo Las Vegas
Iifoto zeReferensi zePainting: Landscapes
Imfazwe ye-1812: iMfazwe yaseLake Erie
Ikhutshwe nguGordon Korman
Umgaqo 1: Umdlalo (iMithetho yeGolf)
Iisiseko zeNguqulelo yeLizwi lesiFrentshi nge-Inversion
Qonda i-Tug-of-War-Life of Love With Quotes of Quotes
I-parataxis (igrama kunye nesimboli somprosekisi)
IWGC HSBC Champions